သျှင်နေမင်း: စင်္ကာပုမှ အမှတ်တရ အလုပ်သမားဘ၀
စင်္ကာပုမှ အမှတ်တရ အလုပ်သမားဘ၀
အချိန် – နံနက် ၅း၃၀
နေရာ – Singapore ဟု ခေါ်တွင်သောအရပ်
စံမြန်းရာ သာစွဌာနေ Limchukang တောအုပ်ကြီးထဲမှာ ခန့်ညားစွာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်သမားဆောင်ကြီးက အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေ ကျွန်တော်နဲ့ အမြဲအတူရှိနေပေးတဲ့ ကြမ်းပိုးတွေ၊ လူသားစား ပိုးဟပ်ပေါက်စနလေးတွေကို စိတ်မကောင်းစွာနှုတ်ဆက်ရင်း India တွေ၊ ဘင်္ဂလားတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ ရေချိုးခန်းမှာ မျက်နှာသစ်ဖို့တစ်နေရာကို လုရတာပေါ့လေ။ ဒီလိုနဲ့တိုးဝှေ့ပြီး ကိုယ့်မျက်နှာဟောင်းကြီးကို သစ်လာမလားလို့ ရေနဲ့ ဆေးကြောပြီးသကာလ အပြာရောင်လို့ မနည်းသေချာပြောယူရတဲ့ Uniform ကို ကသုတ်ကရိုက်ဝတ်၊ ညကတည်းက ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ထမင်းဘူးနဲ့ ကိုယ့်အထုပ်လေးကို ကိုယ်ဆွဲပြီး အကြိုတော်ထောက်နေမယ့် စီးတော်ယာဉ် Lorry ကားကြီးမှာ ထိုင်စရာတစ်နေရာမရမှာစိုးလို့ အပြေးတစ်ပိုင်းခြေလှမ်းလေးနဲ့ တောအုပ်ကြီးကို နောက်မှာလွှင့်ပစ်ထားခဲ့ရတယ်။
အချိန် – နံနက် ၆း၀၀
ဟော… ရောက်လာပါပြီဗျာ၊ တစ်နေ့တာငရဲခံရမယ့် Jurong Shipyard ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးက မနက်စောစော သုန်မှုန်နေတဲ့၊ အိပ်ချင်နေတဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ ဆီးကြိုလို့နေတာပေါ့။ ပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေကျ နေ့တစ်နေ့လိုပါပဲ၊ တိုကင်ပြားလေးတွေ တစ်ဖက်ကကိုင်၊ တစ်ဖက်က Punch Card လေးကိုကိုင်ရင်းနဲ့ တအိအိနဲ့ ပျင်းရိပျင်းတွဲရွေ့လျားနေတဲ့ လူရထားတွဲကြီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စီးမျောစေရင်းနဲ့ နာရီဝက်အကြာမှာတော့ ကိုက် တစ်ရာခန့်အကွာအဝေးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ သဘောင်္ကျင်းကြီးထဲမှာ မနက်ခင်း Meeting နဲ့အနီးဆုံးနေရာကို ရောက်အောင်ပြေးရတယ်။ တော်ကြာနေ တစ်ရေးအိပ်စရာနေရာကောင်းကောင်းမရမှာလဲ စိုးသားဗျ။ ကိုင်း…. တွေ့ပါပြီဗျာ၊ လေလေးတစ်ဖြူးဖြူးနဲ့ ညီညာတဲ့ မြေနေရာလေးတစ်ခု။ ဒီလိုပဲအိပ်လိုက်တော့မယ်လေ.. ဟဲဟဲ
အချိန် – နံနက် ၇း၃၀
ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက် Speaker ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ သီချင်းသံပျင်းရိပျင်းတွဲကြီးကိုနားထောင်ရင်း ခြေထောက်လေးနည်းနည်းလှုပ်၊ လက်ကလေးနည်းနည်းမြှောက်လိုက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တာ… တစ်ကယ်ဗျာ.. တော်တော်လန်းဆန်းသွားတာ(မျက်လုံးတွေတောင် ပြန်စင်းလာတယ်)။ ပြီးတာနဲ့ ၈း၀၀ မထိုးမချင်း ဘာပြောမှန်းသေချာနားမလည်ပဲForeman မလေး-တရုတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး သူပြောချင်တာလျှောက်ပြောနေတာကို သည်းညည်းခံနားထောင်နေရတယ်လေ။ ခုလို မျက်နှာပေးလေးတွေနဲ့…………….
အချိန် – နံနက် ၈း၀၀
ပျင်းရိပျင်းတွဲ၊ လေးတိလေးကန်ခြေလှမ်းတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာ ရေနံတူးစင် တစ်ပိုင်းတစ်စကြီးပေါ်ကို သံတိုသံစတွေ၊ တိုလီမုတ်စတွေ သယ်ပြီးတော့ လှေကားထစ်တွေကို တစ်လှမ်းချင်းစီနင်း၊ ရှုချင်စရာ နေရာကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုငေးမောရင်း ရောက်ခဲ့တာ ခုလို ၀တ်စုံပြည့်လေးနဲ
အချိန် – ညနေ ၆း၀၀
တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ပြီးပါပြီ၊ OT ကလဲမရှိတော့ ဒီနေ့တော့ စောစောပြန်ဖြစ်ဦးမှာပေါ့.. ကိုင်း ကိုက်၁၀၀ ခန့်အကွာအဝေးကို တစ်နာရီလောက် ခုလိုလေးတိုးလိုက်ဦးမယ်
အချိန် – ညနေ ၆း၄၅
တစ်နေကုန် ပင်ပန်းထားသမျှကို ခုလိုအပြင်ကလေထုရှူရမှပဲ အမောပြေသွားသလိုတော့ ရှိသား။ စီးတော်ယာဉ် Lorry ကြီးကလဲ ပေါ်မလာသေးတာကြောင့် လူသားပီသတဲ့ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မဟာ ပထ၀ီမြေကြီးနဲ့နီးစပ်အောင် အားပါးတရထိုင်ချရင်း ငေးစရာကောင်မလေးတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ လမ်းမကြီးကို မျက်နှာမူရင်း စောင့်နေရတာ တစ်ခါတစ်လေများ မိုးက အငြိုးနဲ့ ရွာချတတ်ပြန်သေးတယ် ဒီလိုနဲ့… ဒီလိုနဲ့… သာယာရှုမောဖွယ်ရာ စိမ်းလန်းမြိုင်ကြီးထဲကို ရောက်ရှိ်ပြီးသကာလ၊ ရေချိုးရန်တိုး၊ ဈေးဝယ်ရန်တိုး၊ ဟင်းချက်ရန်တိုး၊ အ၀တ်လျှော်ရန်တိုး၊ အကုန်လုံးကို တိုးဝှေ့ကျော်ဖြတ်ပြီး အားလုံးပြီးပြီ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနားယူတော့မယ်ဆိုပြီး နာရီကိုကြည့်လိုက်မိတော့ သြော်…. သန်းခေါင်တောင် ကျော်ပါပေါ့လား…………
(တစ်ချိန်တုန်းက စင်္ကာပူအလုပ်သမားဘ၀ အမှတ်တရပုံရိပ်များပါ)
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:22 AM
ဘယ်သူမဆို ဝေဖန်သွားလို့ ရပါတယ်
အပြုသဘောနဲ့ ပေါ့ 
ဘဝ ရဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်...
ဟောင်းနွမ်းသော မြို့ သစ်
သားသမီးက မိဘအပေါ်ထားတဲ့ အချစ်